Sarimihetsika - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Nandraisana fepetra manokana indray ny fiambenana ireo toby miaramila sasany toy ny toby Ratsimandrava. Efa mahazatra ny fanehoan-kevitry ny tompon’andraikitra mikasika ny trangan-javatra tahaka izao. Tsy maintsy manalefaka ny toe-java-misy hatrany, saingy ny hitsikitsika tsy mandihy foana…
Efa dila marina ny fetin’ny Krismasy ny fiandrasana ny taom-baovao, izay hany fotoana toa mba mampahalefaka sy mampahamora fo ny ankamaroan’ny olona. Ny an’ny politika efa fantatra fa fiatoana marina tokoa, tsy haharitra fa hiserana ihany no hisy. Injao sahady ary fa efa miverina indray ny feo amin’ny mety hisiana fakana toby miaramila. Tsy horonantsary vaovao intsony io fa asa na ireo tena »matihanina » no hilalao ao anatiny amin’ity indray mitoraka ity na mbola mpilalao vao misondrotra indray…
Malaza ratsy Tafiditra ho laharana fahafito amin’ireo firenena folo maneran-tany voasokajy ho manana mponina mitaintaina fatratra indrindra noho ny tsy fandriampahalemana i Madagasikara, raha ny fanadihadiana nataona tranon-kalam-pifandraisana vahiny iray. Na i Afghanistan aza dia mbola ao aoriantsika, araka ity filaharana ity. Saika zavatra ratsy sy mamohehatra hatrany no hisongadinan’i Gasikara tato ho ato. Tsy kisendrasendra mihitsy ny hoe nanomboka tamin’ny taona 2009 no nankaty dia vao mainka nihanitombo ny tsy fandriampahalemana. Tsy maharesy lahatra intsony ilay filazan’ireo be bokotra fa basy niparitaka nandritra ireo krizy tany aloha no nampiasain’ny jiolahy. Misy amin’ ireo natao ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananany mihitsy no mandroba. Hatramina olom-boatendry hanao lalàna aza moa voatonontonona amina fanakanan-dalana. Izay tetezamita mampiroborobo ny asan-jiolahy izay no mbola misy maniry fatratra ny hitohizany. Tsy saro-karohana fa miavaka eny foana ireo mahita tombontsoa amin’izany.
Bao tsy mivily, Mpanoratra Rijakely, 09.01.2013, 09:11	FIARAHAMONINA